मनोरञ्जन Archives - Page3of 258 - Sawal Nepal
कृशल कँडेल र मेलिनाको स्वरमा ‘यी आँखाका नानी’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
गायक कृशल कंडेलको ‘ओडेर घुँघट’ सफलतापछि ‘ओडेर घुँघट’ को बाँकी कथा भनिएको ‘यि आँखाका नानी’ बोलको भिडियो सहितको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा कृशलसँगै मेलिना मैनालीले स्वर भरेकी छिन् । गीतको भिडियोमा अभिनय पनि कृषल र मेलिनाले नै गरेका छन् । ओडेर घुँघट मा कृशल र सेड्रिना शर्माको जोडि थियो भने बाँकी कथामा मेलिनाको प्रवेश
घना जंगलको बीचमा बच्चा रोएको आवाज सुनियो भने कस्तो प्रतिक्रिया होला ? तर, यस्तो आवाज निकालेर चरा पनि कराउँछ । अष्ट्रेलियाकाो सिड्नीस्थित तारोङगा चिडियाखानामा एउटा यस्तै चरा राखिएको छ । जसले बच्चा रोएको आवाज निकाल्दै कराउँछ । यसको नाम लायरबर्ड हो । मानिसको नक्कल गर्ने भएकाले यसलाई नक्कल गर्ने चरा पनि भनिन्छ । अष्ट्रेलियाको तारोङ्गा
चेपाङ समुदायको कथामा आधारित चलचित्र बन्दै
गोबिन्द गौतमको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘अस्तित्वको लडाईं’ को शुभ मुहर्त गरिएको छ। मकवानपुर जिल्लाको चैनपुर स्थित राक्सिराङ भन्ने ठाउँमा एक समारोहबीच चलचित्रको मुहर्त गरिएको हो। चलचित्रको कथा पनि निर्देशकले गौतमले नै लेखेका हुन् । चेपाङ्ग समुदायको कथामा आधारित रहेर बन्न लागेको चलचित्रको छायांकन दशैं तिहार पछिबाट सुरु हुने कार्यकारी निर्माता सुवास काफ्लेले बताए। सरीता ढुङ्गानाद्वारा
अभिनेत्री ऋचा शर्माले छोराको नाम आभ्यान बिक्रम राणा राखेको जानकारी दिएकी छन् । बुधवार पहिलो सन्तानको रुपमा छोरालाई जन्म दिएकी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै छोरोको नाम सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले छोरालाई पुरुष मात्र नभएर असल मान्छे बनाउने लोभ आफुमा रहेको समेत खुलाएकी छन् । श्रीमान् र नवजात शिशु सहितको तस्बिर पोष्ट गर्दै
के कमेडी च्याम्पियन–२ भरतमणिले नै जित्लान् त ?
कमेडी च्याम्पियन–२ को उत्कृष्ट तीन (फाइनलिष्ट) प्रतियोगी भरतमणि पौडेलको यतिबेला सबैतिर छाउन सफल भएका छन् । उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँ उनको भव्य स्वागत र सम्मान समेत हुने गरेको छ । मंगलबार गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका भरतमणिलाई त्यहाँ पनि भब्य स्वागत गरिएको छ । ताप्लेजुङ–पाँचथरको सीमा क्षेत्र काबेलीबाट मोटरसाइकल र्यालीसहित फुङ्लिङ भित्र्याएर उनलाई नौमति बाजा र
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री ऋचा शर्मा आमा बनेकी छिन् ।उनले छोरालाई जन्म दिएको कमेडी च्याम्पियनको आधिकारिक पेजमा जानकारी दिइएको छ ।कमेडी च्याम्पियनको उक्त पोस्ट अभिनेत्री केकी अधिकारीले पनि सेयर गर्दै बधाई दिएकी छिन् ।
यी हुन् संसारकी सबैभन्दा सुन्दरी युवती, जो ४ वर्षको उमेरदेखि गर्दै आएकी छिन् मोडलिङ[हेर्नुहोस फोटो पिक्चर सहित ]
निकै कम उमेरमा आफ्नो लुक्सका कारण चर्चामा हासिल गर्ने फ्रेन्च मोडल थायलेन ब्लोन्डेउ एकपटक पुनः चर्चामा आएकी छिन् । उनी हालै आफ्ना प्रेमीसँग रिल्याक्स गरिरहेको देखिएकी थिइन् । थायलेनले सबैभन्दा पहिला चर्चा ६ वर्षको उमेरमा बटुलेकी थिइन् जब उनी संसारकी सबैभन्दा सुन्दर केटीको रुपमा मिडियामा छाएकी थिइन् । सन् २००७ मा थायलेनलाई टीसी क्यान्डलरको सय
भरतमणि, विक्की र सन्तोषमध्ये को होला कमेडी च्याम्पियन ?
कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’ पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ । शोका प्रतियोगी भरतमणि पौडेल पूर्व युवराज पारस शाहको गेट अपमा प्रस्तुति दिएपछि शो को चर्चा चौतर्फी चुलिएको हो । भरतमणि स्वयम् पनि उक्त प्रस्तुतिले सिधै फाइनलमा पुग्न सफल भएका थिए । शो अहिले फाइनल स्पर्धामा पुगेको छ । जसमा भरतमणि पौडेल, विक्की अग्रवाल
चलचित्र तथा संगीतक्षेत्रमा निर्माता पुत्रको दमदार इन्ट्री
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र तथा संगीत क्षेत्रमा दोश्रो पुस्ताको राम्रै उपस्थिति देखिइरहेको समयमा निर्माता दिनेश दर्शनधारी र यसोदा राईका छोराहरु देल्बिस दर्शनधारी र राज रोहन तुम्बाहाम्फेले कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छन् । घर – परिवारबाट नै कला क्षेत्रमा लाग्ने र अघि बढ्ने प्रेरणाका साथ यी दुई ह्यान्डसम युवाहरु कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रिज्मा–प्रिन्सीको मुस्कान हेर्नुहोस [फोटो पिक्चर सहित ]
टिकटकमा राम्रो फलोअर्स कमाएपछि म्युजिक भिडियोमा प्रवेश गरेका जुम्ल्याहा दिदी बहिनी प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा अहिले यही क्षेत्रलाई करिअर बनाउँदै अघि बढिरहेका छन् । उसो त, म्युजीक भिडियोमा पहिलेको जस्तो माग उनीहरुको अहिले देखिदैन । तर, पनि यी दुइले एकसाथ काम भने अगाडि बढाइरहेका छन् । सोमबार सार्वजनिक भएको ‘तिम्रै नग्मा’ बोलको गीतमा नायक आकाश
कस्तो छ त आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेर्नुहोस
एकीकृत समाजवादीको महासचिव : बेदुराम भुसाल